Nhau - Arden Router bits
Chishandiso kubata matanho.
1. Arden maturusi akagadzirirwa vashandisi vehunyanzvi vachishandisa akasiyana masosi ezvishandiso zvakasiyana, zvinonyanya kukamurwa muzvikamu zvishanu: chipboard, MDF, solid wood, Plexiglass uye artificialstone, vashandisi vehunyanzvi maererano nezvinhu zvakasiyana sarudza chishandiso chakasiyana, kuti uwane mhedzisiro yepamusoro uye kusimba kwekucheka, kudzivirira chishandiso kubva kumanikidza kuti iputse, maturusi ese akagadzirirwa kutenderera zvichienderana neawa.
2.Zvese zvishandiso panguva yakapedzwa, ndeyekuenzanisa bvunzo, svetuka kusahadzika kuti pakanga pasina nzira, yekudzivirira chishandiso mukushandisa zvakare pasina kusvetuka nekurova, ona kuti michina inotenderera nemidziyo uye jekete rakanaka.
3. Bhachi rinofanira kusarudza saizi chaiyo, kana ikaonekwa kuti haina kutenderera kana kupfeka bhachi ndizvo zvave kuita, ichaita kuti bhachi rive rakajairika uye rakaringana yekuchekesa chishandiso, nekukasira kutsiva bhachi neyakajairwa maratidziro, dzivisa chekushandisa pasi pe- kumhanya kutenderera kudedera, kubhururuka uchibva kana kupaza mamiriro ane njodzi.
4. Chishandiso chinobata iyo yekumisikidza ichave inoenderana nemitemo yeEU. Semuenzaniso, 12.7mm shand dhayamita yeiyo clamping kudzika inofanira kunge iri kusvika 24mm, kuchengetedza kumanikidza pane iyo shaft inofanirwa kuve inokwanisika. Ratidza semufananidzo mumwe. Semufananidzo:
5. Kumhanyisa kumisikidza:
Yakakura Outsie dhayamita yematurusi inofanira kuiswa zvinoenderana neinotevera tachometer uye zvishoma nezvishoma, uye chengetedza kusimudzira yunifomu kumhanya, kwete kurega kusimudzira zviito mukucheka maitiro. Ratidza sezviri pazasi:
Yakakurudzirwa router kumhanya
Bit dhayamita Kunonyanyisa kumhanya
6. Kana mucheka paakajeka, chinja chishandiso chitsva, usaramba uchishandisa kuitira kudzivirira kutsemuka kwechombo uye tsaona mumaindasitiri.
7. Ndokumbira usarudze chipande chakareba kupfuura zvinhu zvekushanda kana iwe ukashandisa chishandiso, senge: iyo groove yekugaya yakadzika ye12,7mm, shandisa iyo 25.4mm kureba kweye blade cutter, dzivisa kushandisa 12.7mm kana pasi pe 12.7mm maturusi ekucheka.
8. Kana mashandiro acho, shandisa magirazi ekuchengetedza ekupfeka, pushisi yekuchengetedza, paunoshandisa michina yedesktop nemidziyo inoda kugadzira mudziyo, dzivisa zvinhu zvekushandisa uchishandisa anti-rebound mudziyo, kudzivirira tsaona yezvinhu zvebasa muRally yekumhanya kucheka.
Cnc Mashini Maturu, Robin Wood Zvishandiso, Woodworking Turu Kanzuru Zvirongwa, Wooden Chishandiso Cabinet, Cnc Bits, Cnc router mabhatani,